सरकारको शैली फेर्न कँगेसलाई मत - Pradesh Today
Homeफिचरसरकारको शैली फेर्न कँगेसलाई मत
सरकारको शैली फेर्न कँगेसलाई मत
काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा भने …
शान्तिनगर, ८ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रम गरी सीमा मिच्दासमेत सरकार बोल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादका नाममा ठूला–ठूला कुरा गरेको सुनिए पनि सीमा मिचिदा चुपचाप रहेको आरोप लगाए । सरकारले गर्नुपर्ने कुटनीतिक पहल र भूमिका सरकारले गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ ।
लिपुलेक, लिपियाधुरा, कालापानीको विषयलाई लिएर देश एक भएको बेला सरकार बोल्न नसक्नु र कुटनीतिक पहल गर्न नसक्नुको कारण प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्नेसमेत माग गरे । प्रधानमन्त्री ज्यू म सोध्न चाहन्छु नेपाली भूूमि अतिक्रमण हँुदा पनि किन तपाई बोल्न सक्नु भएन ? तपाईलाई कसले रोक्यो, सरकारबाट कुटनीतिक पहल किन हुन सकेन ।
बढो राष्ट्रवादी कुरा गरेर चुनाव जितेको नेकपा सरकार आज देशको सीमा मिचिदा पनि कुटनीतिक पहल नगरी जनताको ध्यान मोड्नतर्फ लागेको आरोपसमेत लगाए । सीमा मिचिएको विषयमा सोध्दासमेत दुई तिहाई भएको सरकार यो विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्न नसेको उनको भनाइ छ ।
नेकपाको सरकारले यो विषयलाई लिएर दिल्लीसँग तत्काल छलफल गर्न सक्नुपर्छ । सीमाको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष काँग्रेस सरकारको समर्थनमा रहदा पनि दुईतिहाई सरकार गम्भीर नदेखिनु र कुटनीतिक पहल नथाल्नु दुखद् भएको उनले बताए ।
काँग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले राजदूतलाई फोन गरेर सीमाको बारेमा सोध्न सक्ने, किन सीमा मिचिएको हो भन्न सक्ने, तत्काल अतिक्रमण गरिएको भूभाग छोड्नुहोस भन्न सक्ने तर सरकारले, प्रधानमन्त्रीले किन नसक्ने ? उनले भने, की सरकारसँग दिल्लीको सम्पर्क छैन होला र ?
राष्ट्रको रक्षा र राष्ट्रिय समस्याका लागि नेपाली काँग्रेसले पूर्णरूपमा सरकारलाई साथ दिने बताए । सतप्रतिशत एकता हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले सीमाको विषयमा कुरा उठाउन नसक्नुले केपी ओलीको राष्ट्रवाद उदाङ्गीएको बताए । दाङको शान्तिनगरमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रवक्ता शर्माले देशको शान्ति र लोकतन्त्रलाई बचाउन सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले सहमति र सहकार्य गर्ने र सबैलाई एकैथलोमा ल्याएर समस्या समाधान गर्ने पार्टी काँग्रेस मात्रै भएको समेत दाबी गरे । ‘यो समयमा सहमति र सहकार्यको कुरालाई जोड दिन सक्याँै भने देशको शान्ति र लोकतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा पनि हुन्छ ।
‘यहाँको एक मतले सरकार बदल्न सकिदैन तर सरकारलाई सच्याउन सकिन्छ, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अब सरकारको शैली बदल्नलाई प्रत्येक मतदाताको मतको योगदान रहनुपर्छ । जनताको एक भोटले सरकार बदलिदैन, तर सरकारलाई सच्याउन र सन्देश दिन काँग्रेसको जित आवश्यक र अनिवार्य छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार केशव आचार्यले यो निर्वाचन आफ्नो मात्र नभई सबै जनताको भएको भन्दै आफू जनताको प्रतिनिधि भएको बताए । उनले आफूले जितेमा जनताको सुख, दुःखमा निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिपक गिरी, केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल, राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटा, प्रदेशसभा सदस्य डिल्ली बहादुर चौधरी, पूर्व सांसद गेहेन्द्र गिरी, प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्र हमाल, जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्का, काँग्रेस नेता मदन रसिक, शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिङ डाँगीलगायतले मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए ।
शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं ३ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि मिनबहादुर केसीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरूभएको कार्यक्रमको सहजीकरण प्रजातान्त्रिक उद्योेगी व्यवसायी संघ तुलसीपुरका महासचिव झलक केसीले गरेका थिए ।
यसैबीच रिपोर्टर्स क्लवले प्रवक्ता शर्मासँग साक्षात्कार कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा शर्माले सरकार निर्वाचनप्रति गम्भीर नभएको बताए । सरकार आचारसंहिता पालना गराउन लाग्नुको सट्टा उल्टो आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गतिविधि गर्न लगाउनु दुखद् घटना भएको वताए ।
दाङबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना सबै पक्षबाट हुनुपर्छ त्यसको लागि नेपाली काँग्रेस सधै तयार रहेको बताए । निर्वाचन प्रभाव पार्ने खालका गतिविधिलाई तत्काल रोक्न नेकपाको दुईतिहाई सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।